महिला च्याम्पियनसिपः भारतलाई स्तब्ध पार्दै नेपाल फाइनलमा, उपाधि भिडन्त कोसँग ? - Everest Dainik - News from Nepal
महिला च्याम्पियनसिपः भारतलाई स्तब्ध पार्दै नेपाल फाइनलमा, उपाधि भिडन्त कोसँग ?
काठमाडौं, असोज १९ । नेपाल भूटानमा जारी साफ यू-१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । शुक्रबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भारतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-१ ले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल पुगेको हो ।
थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा निर्धारित ९० मिनेट र थपिएको अतिरिक्त समय एक÷एक गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगको थियो ।
पेनाल्टीमा नेपालकी गोलकिपर अन्जना रानामगरको उत्कृष्ट प्रदर्शनले नेपाल फाइनल पुग्न सफल भयो । रानामगरले भारतको दुई पेनाल्टी रोकिन् भने एक गोल गर्न सफल भइन् । नेपालका रेखा पौडेल र मनिषा राउतले पेनाल्टीमा गोल गरिन् । पूजा रानाको प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेन । भारतका टुडु जाबमानीले एक गोल गरिन् ।
याे पनि पढ्नुस महिला फूटबल टोली भुटान प्रस्थान
यसअघि रश्मीकुमारी घिसिङको गोलबाट १६ औं मिनेटमा अग्रता लिएको नेपालले ६३ औँ मिनेटमा गोल खाएको थियो । भारतकी समीक्षाले ६३ औँ मिनेटमा गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइन् ।
नेपालले फाइनलमा बङ्गलादेश र भुटानबीचको विजेतासँग खेल्नेछ । आजै हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक भूटान र बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
याे पनि पढ्नुस भारत विरुद्धकाे पहिलो खेलमा नेपाल ६२ रनले विजयी
याे पनि पढ्नुस भुटानमा २ जना नेपाली भाषी मन्त्री
हरिओम श्रेष्ठको मुख्य प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोलीका सहायक प्रशिक्षक प्रकास वैद्य र गोलकिपर प्रशिक्षक अस्मिता खवास रहेका छन् । -रासस
ट्याग्स: bhutan, nepal vs india, महिला च्याम्पियनसिप